Duqa Muqdisho oo la kulmay Ardayda Uganda Wax ka barata iyo Madaxda Safaarada Soomaaliya ee Uganda
Ardayda Soomaalida ah ee wax ka barata wadanka Uganda ayaa kulan soo dhaweyn iyo kala warqaad u sameeyay wafdiga uu hogaaminayo duqa magaalada Muqdisho ahan gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Kulankani soo dhaweynta ah ee ardayda Soomaalida ah u sameeyeen mayarka Muqdisho Mudane Max’uud Axmed Nuur Tarsan oo ay ka soo qeyb galeen inta badan ardayda Soomaalida ah ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee wadanka Uganda isla markaana ka dhacay hotelka Sojofalo ee magaalada Kampala ayaa waxaa ujeedka kulankani ugu horeyn ka halay gudoomiyaha midowga ardayda Soomaalida ee wadanka Uganda C/rashiid Max’ud Xuseen.
“Mudane Mayar ku soo dhawoow magaalada Kampala ardaydani waxaa ay diyaar u yihiin in ay kaa dhageystaan wax qabadka Muqdisho iyo weliba fursadaha uga banaan ardayda dib u dhiska wadanka” ayuu yiri gudoomiyaha midowga ardayda Soomaalida ee wadanka Uganda.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahana duqa magaalada Muqdisho Mudane Tarsan oo lagu soo dhaweeyay hadalka ayaa ugu horeyn ka war bixiyay xaalada Muqdisho xiligan isla markaana ardayda kula dardaarmay in wadanka uu sugayo dib udhiskiisa.
“Dalku waxaa uu burbursanaa mudo 21-sano ah waxa uu sugayo in ay wax ka qabtaan waa dadiina yar yar ee dalka wax u baratay,magaalada Muqdisho waa nabad 100% dhagna ha u dhigina warbaahinta waxyaabaha ay buun buuninayaan” ayuu ardayda ku booriyay Mayarka Muqdisho.
Kulankani soo dhaweynta iyo kala warqaadashada ay u sameeyeen midowga ardayda mayarka Muqdisho waxaa ku wehliyay Iimaan Nuur Iikar ku xigeenka duqa Muqdisho ee dhanka maamulka iyo maaliyada iyo xubno kale,waxaana duqa magaalada Muqdisho ahan gudoomiyaha gobolka Banaadir Max’uud Axmed Nuur Tarsan ardayda waxaa ay gudoonsiiyeen shahaado sharaf lagu abaal mariyay howlaha iyo horumarka uu gaasiyay magaalada Muqdisho.
Xoghayaha 1-aad ee safaarada Soomaaliya ee Dalka Uganda Mudane Qadar War Jiid oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa aad uga mahad caliyay wafdiga uu hogaaminayo duqa Muqdisho sida ay uga aqbaleen casuumaada ay ardayda u fidiyeen
Inta uu kulanku socday ayaa waxaa ay ardaydu su’aalo weydiinayeeun Mudane Tarsan iyo Iikar kuwaasi oo ku aadanaa xaalada Muqdisho iyo weliba kaalinta ay ardayda uga aadan howlaha dalka,waxana masuuliyiintu ay si saraaxad ah uga jawaabayeen la weydiinayay.
Sidoo kale Mayarka Muqdisho ayaa waxaa uu booqasho ku tagay safaarada Soomaaliya ee dalka Uganda halkaasi oo uu kula kulmay Qunsulka safaarada Mudane Muuse Macalin Yuusuf waxana uu qunsulku uga war bixiyay howlaha safaaradda.
Kulani ayaa waxaa uu qeyb ka yahay kulamo uu duqa magaalada Muqdisho inta uu joogo dalka Uganda uu la qaadanayo qeybaha kala duwan eeJaaliyada Soomaalida ee Uganda.